संकटमा घरेलु व्यवस्थापन - बहस - नारी
संकटमा घरेलु व्यवस्थापन
पुस १९, २०७२संकटमा घरेलु व्यवस्थापन
नेपालीहरूलाई अहिले ठूलो समस्याले सताएको छ । हरेकको घरमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाली जनता राजनीतिक संकटका साथै बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन् । ग्यास, मटीतेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा दु:ख भोगिरहेका नेपालीहरूले अब कस्तो विकल्प खोज्ने वा यस्तो अवस्थामा घरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
सहयोगी : विमिन एक्ट, रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धता, टंगाल, भाटभटेनी
रजनी प्रधान, अन्तर्राष्ट्रिय महिला सह–संयोजक, गैरआवासीय नेपाली संघ
नाकाबन्दी हामी नेपालीका लागि भूकम्पभन्दा ठूलो प्रकोप हो । दोष कसलाई दिने ? सरकारलाई कति भन्ने ? हामी आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामी एकदमै परनिर्भर भयौं । हामी डायस्पोरामा बस्नेहरू सदा यहीँकै समस्याका बारेमा कुरा गर्छौं । यस्ता समस्याका बीच पनि हामीलाई जन्मभूमि नै प्यारो लाग्छ । मैले त्यहाँ जे गर्छु मुलुकका लागि हो । हरेक देशका एनआरएन हामी यतिबेला औषधिको आपूर्तिमा लागेका छौं । वैकल्पिक रूपमा बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो आदिमा जोड दिनुपर्‍यो । मुख्यत: मुलुकमा आइपरेका यस्ता विकराल समस्या हल गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्‍यो । हामी विदेशमा बस्नेहरू आफ्नै देशमा लगानीको सही वातावरण खोजिरहेका छौं ।
मेरिन लोप्चन राई, व्यवसायी
देशको अवस्थाले प्रत्येक घरमा नकारात्मक असर पारेको छ । सरकारलाई पनि हामीले आफ्ना समस्याका बारेमा घचघच्याउनुपर्छ । यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकारले नै समाधानमा जोड दिनुपर्छ । अहिले म इन्डक्सन प्रयोग गरिरहेकी छु । यस्तो बेला सरकारले विद्युत्मा सहुलियत दिनुपर्छ । हामीले घरमै उत्पादन गर्न सकिने अग्र्यानिक तरकारी, सोलार पावरजस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्छ । पहिले म अनेकन परिकार पकाउँथें भने अहिले दुईथोक मात्र पकाउँछु । अहिलेको घटनाले हामीलाई परनिर्भर हुनुहुन्न भनेर पाठ सिकाएको छ । त्यसैले अब त्यस्तो कार्यक्रम अगाडि ल्याऊँ जुन महिलाका लागि संकटका बेला उपयोगी होस् । व्यक्तिगत रूपमा घरका लागि मात्र गर्न सकिन्छ तर समग्र नागरिकको ऐक्यबद्धताद्वारा सरकारलाई दबाब दिन आवाज उठाउनुपर्छ । अहिलेको घटनाले व्यवसायमा नराम्रो असर परेको छ । भारतबाट आउने मेरो सामान फर्किएर बैंकक पुगी नेपाल आयो अब ती सामान कसरी बेच्ने, कतिमा बेच्ने ?
म कसैलाई गाली गर्दिन नराम्रो पनि भन्दिन । यो हाम्रो कारणले भएको होइन । हामीले आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ । खान पाइँदैन भने पनि हामी झुक्दैनौं तर हामीमा पनि के समस्या छ भने हामी विकल्प राख्दैनौं । अबदेखि सामान स्टोर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । हामी हाम्रा लागि आफैं गरौं । हामी गर्न सक्छौं । अर्काको भर पर्ने बानी र संस्कार बदल्नुपर्छ । अहिले व्यावसायिक हिसाबले पनि अत्यन्तै कठिन छ । नम्र भएर धैर्यपूर्वक मुलुकलाई हेर्नुपर्ने बेला आएजस्तो लाग्छ किनभने यस्तै संक्रमणकाल पारेर अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । कुर र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्छ अलि दिन । यद्यपि त्यस्तो दिन आउन नदिऊँ जहाँ हामी सम्पूर्ण नेपाली आक्रामक हुनुपरोस् ।
रश्मिला श्रेष्ठ, सौन्दर्यविद्, रश्मिलाज फेसियल हाउस, काठमाडौं मल
घरमा इन्डक्सन चुल्हो चलाइरहेकी छु । घरमा सानो बच्चा भएकाले विद्युतीय उपकरणबाट नै पानी तताउने, खाना पकाउने आदि काम गर्नुपरेको छ । व्यवसायमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । सरकारले गर्नै नसक्ने कुरामा हामीले पनि दोष दिनु भएन । त्यति ठूलो भूकम्प आउँदा त सहेर बसियो । यो घडीमा पनि केही समय धैर्य गरौं । आफूसक्दो विकल्प खोजौं । आफ्नो समाजलाई सक्दो सहयोग गरौं । यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ सोचौं । सरकारले पनि सचेत भएर छिटोभन्दा छिटो मुलुकमा आइपरेको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दियोस् ।
गंगा पन्त, संस्थापक अध्यक्ष, जनप्रिय महिला संघ तथा समाजसेवी
सक्नेले स्टोर गर्लान् तर मध्यम वर्ग वा निम्न वर्गले के गर्ने ? अघोषित नाकाबन्दीले हामी सबैलाई यस्तो असर पुर्‍याएको छ । ग्यासको ठाउँमा दाउरा बालेका छौं । राइस कुकरमा पानी उमालेर दाल पकाइरहेका छौं । संकटको घडीमा आफूसक्दो व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यसरी कति दिन गुजारा गर्ने ? यो समस्या समाधानका लागि सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण छ । सरकारले पनि मुलुकका लागि विकल्प राखेन । यतिबेला भारतको विकल्प भैदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । अहिले थुप्रै महिला देशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले महिलाका लागि गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।
पुस १३, २०७३ - जाडोमा तौल व्यवस्थापन
श्रावण ३१, २०७३ - कोमल र निखारयुक्त अन्डर आम्र्स
जेष्ठ ३, २०७३ - घरेलु सौन्दर्य प्रश्नोत्तर
वैशाख १३, २०७३ - ट्यानिङको उपचारका लागि केही घरेलु उपाय
फाल्गुन २७, २०७२ - युवतीहरूमा व्यवस्थापन मोहले बढायो विदेशको आकर्षण
शून्य सहिष्णुता नीति चैत्र १३, २०७४
ढिलो विवाहको परिणाम फाल्गुन १४, २०७४
पेपर म्यारिज मोह माघ १०, २०७४
महिलामा निर्णायक क्षमता कार्तिक १५, २०७४
दसैं किन सर्वाधिक महत्वको चाड ? आश्विन ४, २०७४
धर्मले महिलालाई सशक्त बनाउँछ कि कमजोर ? भाद्र ७, २०७४